साहित्यमा त्यो हस्तक्षेप- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
साहित्यमा त्यो हस्तक्षेप
अझै त महिलाका कृतिलाई भयानक शंकाको नजरले हेरिन्छ, उसको नामसँग कुनै पुरुषको नाम नजोडी किताबको एक्लो समीक्षा गर्न नसक्ने ‘हिप्पोक्रेसी’ यहाँ जिउँदै छ, २०२२ सालताका ‘शिरीषको फूल’ र पारिजातको सहज स्वागत भयो होला भनी कल्पना गर्न पनि हम्मे पर्छ ।
आश्विन ७, २०७४ सरिता तिवारी
नेपाली साहित्यका पाठक पारिजातको लेखनबाट अपरिचित र अप्रभावित छैनन् । सबै खाले पाठकलाई पारिजातको साहित्य रुचाउने सुविधा छ । यस्तो सुविधा कमै मात्र लेखक पढ्नुमा हुँदो हो ।
दार्जिलिङमा जन्मे–हुर्केर काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाउने सिर्जनशील प्रतिभाहरूमध्ये एक पारिजात पनि हुन् । यो सूचीमा अरू अनेक स्रष्टा छन्, जसले पूर्वी सीमापारिबाट आएर ठूलो समर्पणले नेपालको साहित्य, कला र सङ्गीतमा विशिष्ट प्रभावहरू छोडेका छन् ।
पारिजातले सानै छँदा आमा गुमाइन् र हुर्कंदै गर्दा मायालु दाजु पनि दन्त्यकथाका अभागी नायकझैं अल्पिए । पिता घोर नास्तिक, घोर पढक्कु र आफ्नो संकल्पका पक्का थिए । अवचेतनमा पिताको सुषुप्त अनुशीलन पनि बसेको हुँदो हो, पारिजात स्कुलकै दिनमा साहित्यप्रेमी बनिन् । लोक प्रचलित लहरी काव्य र भारतीय साहित्यका नामूद लेखनीसँग परिचित भइन् । जीवनका प्रकोप र साहित्यको तादात्म्य कतै मिल्न पुग्यो । भावुकता र रुमानियत उनको व्यक्तित्वसँगै गाँसिन आइपुगे । उनी कविताप्रेमी मात्र होइन, स्वयं कवि बनिन् । शरीरमा कहिल्यै निको नहुने रोगका सङ्क्रमणहरू देखिनु र बिस्तारै आफूभित्र पलाउन लागेको प्रेमको पालुवा आफ्नै हातले किचिमिची पार्दै बाँच्न सिक्नु— यी दुइटै कुरा क्रमागत भएर उनको जीवनमा आए ।
रुमानी भाव र अति कल्पनाशीलताकी धनी पारिजात कलकलाउँदो बैंसकै दिनमा काठमाडौं आइपुगिन् । प्रेमको गहिरो विषाद र आफन्तका शोकको शृङ्खलाबद्ध पीडा उनका मानस–मित्र थिए । र, सम्भवत: साहित्यलेखनका उत्प्रेरक पनि । उनीभित्र घरी–घरी बौरिइरहने प्रेम सुषुप्त रहन सकेन । अवसादमय प्रेमका वर्णनातीत घाउ उनका आरम्भिक कविता लेखाइका विषय बने । पहिलो कविता २०१३ सालमा ‘धरती’ मा छापियो । त्यसपछि २०१४ सालमा कवितासंग्रह नै प्रकाशित भयो, ‘आकांक्षा’ ।
विवाद र संक्रमण
बहुचर्चित ‘शिरीषको फूल’ ले नेपाली साहित्यमा पृथक् स्वादको तरङ्ग ल्याउनुअघि उनका चार उपन्यास जन्मिनुपूर्व नै जलाइए । विश्वसाहित्य पढ्दै गर्दा भित्रभित्र ‘बेजोड उपन्यास लेख्ने महत्त्वाकांक्षाको राक्षस’ ले शिर उठाउन थालेपछि उपन्यास लेख्न बस्दा उनलाई आफैंले लेखेका चीज झुर लागे । र, आफैंले जलाइदिइन् । ती चार उपन्यासको दहनबिना ‘शिरीषको फूल’ जस्तो किताब लेखिन सम्भव पनि नहँुदो हो ।
‘शिरीषको फूल’ नेपाली साहित्यमाथि पारिजातको विस्फोटक हस्तक्षेप थियो । मानौं सबका आँखा खुलाका खुलै रहेजस्तो क्षण ! त्यो विस्फोट अहिलेको जस्तो स्टन्टबाट थालिएर फास्सफुस्स भई बिर्सिइने खाले थिएन । नेपाली साहित्यमा यो जति प्रशंसित वा आलोचित किताब कमै होलान् । यसबाट पारिजात एकाएक प्रसिद्धिको शिखरमा पुगिन् । दार्जिलिङबाट छिरेकी एउटी महिला ! अझै त महिलाका कृतिलाई भयानक शंकाको नजरले हेरिन्छ, उसको नामसँग कुनै पुरुषको नाम नजोडी किताबको एक्लो समीक्षा गर्न नसक्ने ‘हिप्पोक्रेसी’ यहाँ जिउँदै छ, त्यो बेला यो किताब र लेखक पारिजातको सहज स्वागत भयो होला भनी कल्पना गर्न पनि हम्मे पर्छ ।
उपन्यास लेखनमा भाषा र भावको बुनोटबारे आज पनि जब–जब गम्भीर छलफल हुन्छ, ‘शिरीषको फूल’ बहसको केन्द्रमै आइपुग्छ । यद्यपि शून्यवादी–विचलनवादी वैचारिक अपिलका कारण यो कृतिलाई आदर्श मान्न नसकिने तर्क पनि प्रकाशनकालदेखि आजसम्म उत्तिकै बलियो छ, तथापि पछिबाट विचारसचेत र जिम्मेवार लेखक पारिजातको निर्माण गर्ने आधार यही किताबको प्रतिक्रियापछि तय भएका हुन् । यो स्मरणीय कुरा हो ।
‘शिरीषको फूल’ प्रकाशनपछिका दिन उनका लागि भयावह रूपले कठोर र तनावपूर्ण थिए । तिनै तनावदेय दिनमा उनी राल्फा जेनेरेसनको सक्रिय अभियन्ता बनिन् । वैचारिक संक्रमणमय चरणपछि उनको चिन्तन बिस्तारै माक्र्सवादतर्फ ‘सिफ्ट’ भयो । त्यो समय सम्झँदै पारिजातले भनेकी छन्, ‘व्यवहारवाद र उग्रवादबाट आउँदा म प्रगतिवादको हाराहारीमा बाटो बिराएको यात्रीजस्तो भइरहेकी थिएँ । ऐन–मौकामा कोही सहृदयी प्रगतिवादी मार्गदर्शीले यो बाटो हो भनी सही अध्ययनतर्फ सङ्केत गरिदिए । ...यसरी म प्रगतिवादतर्फ प्रतिबद्ध भएँ ।’
राल्फा जेनेरेसनको सहकर्मीका रूपमा उनले पार गरेको वैचारिक सङ्क्रमणले देखाउँछ, एउटा लेखक आफैंमाथि प्रयोग र परीक्षण गर्ने जोखिमबाट कसरी अवतरण गर्न सक्छ ! यही अवतरणको साक्ष्य हो— ‘बैंसको मान्छे’ उपन्यास (२०२९) । यसअघिको ‘महत्ताहीन’ राल्फा मेनिफेस्टोकै एक प्रयोग थियो । ‘आदिम देश’ का धेरैजसो कथा राल्फा चिन्तनकै वरिपरि रिँगेका छन् ।
तीसको दशक थालिँदा पारिजात प्रखर माक्र्सवादी भएर उभिइसकेकी थिइन् । अब उनी आन्दोलनमा थिइन्, ‘एक्टिभिजम्’ मा थिइन् । त्यो पनि नेतृत्वकै तहमा ! उमेरको फेरो घुमाएर हेर्ने हो भने पारिजातको जीवनका वैचारिक आयामलाई असामान्य र विस्मयकारी भन्नुपर्छ । चालीस वर्ष पुगुन्जेल उनको विचार गर्ने तरिका, व्यक्ति र समाजलाई विश्लेषण गर्ने शैलीमा आश्चर्यजनक परिवर्तन देखिएको पाइन्छ । पारिजातमा विकास भएको यो विलक्षणतालाई अवस्थाजन्य मान्ने कि प्रयत्नजन्य ? मचाहिँ दोस्रो मान्छु ।
संवत् २०३२ मा लेखिएको र २०३५ मा छापिएको ‘पर्खालभित्र पर्खालबाहिर’ लाई नेपाली आलोचनात्मक यथार्थवादी धारको उम्दा र रोज्जा उपन्यास मानिन्छ । २०२२ (‘शिरीषको फूल’ प्रकाशन) देखि २०३२ (‘पर्खालभित्र पर्खालबाहिर’ को लेखन) बीचका दस वर्षमा पारिजातको वैयक्तिक जीवनमा जेजस्ता ऊहापोह आए, ती कुनै पनि लेखन–जीवनबाट अलग थिएनन् । बरु लेखकीय जीवनका उतारचढावकै कारण निर्मित थिए । अस्थिर र उकुसमुकुसमय मानसका बीचमा पनि प्रतिबद्ध लेखनतर्फ उत्प्रेरित गर्ने चीज अरू केही थिएन, उनले प्राप्त गर्न थालेको राजनीतिक संसर्ग थियो, फेरिँदै गएको मित्रवृत्त र त्यहाँ उपलब्ध वैचारिक अन्तरक्रिया थियो । लेखनलाई ‘मिसन’ मा जोड्न थालेपछि राजनीतिक चरित्रका उपन्यासमा उनको मिहिनेत पूरै गोचर छ । यसलाई घुमाएर भन्नु जरुरी छैन, पारिजात तत्कालीन क्रियाशील कम्युनिस्ट पार्टीको सक्रिय सहकर्मी थिइन् । यसपछिको लेखनले उनको लेखकत्वको दोस्रो इनिङलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । ‘पर्खालभित्र पर्खालबाहिर’ (२०३५) र ‘अनिँदो पहाडसँगै’ (२०३९) राजनीतिक साध्यलाई लक्षित गरेर लेखिएका उपन्यास नै हुन् । तत्कालीन पञ्चायती ब्यवस्थाले रचेको प्रपञ्च र दमनको माहोलमा जनपक्षीय प्रतिरोधको आवाज र भूमिगत वाम आन्दोलनलाई मूर्त र स्पृश्य देखाउन यी उपन्यास सफल भएका हुन् भन्नेमा फरक मत नहोला । पक्षधरताको लेखनलाई सामाजिक र राजनीतिक आयामसँग जोडेर पारिजातले यी उपन्यासमा गरेको प्रयास शैलीशिल्पका दृष्टिले त्यस्तो कमजोर लाग्दैन जति उनलाई वाममार्गी भएकामा रोष प्रकट गर्नेहरूले आरोप लगाउँछन् ।
परिजातले बहुत उम्दा र अनेकौँपल्ट दोहोर्‍याएर पढ्न मन लाग्ने कथाहरू लेखिन् । उनका कथाले व्यक्तिको अन्तर्लोक र विसङ्गत विचार हुँदै सामाजिक सरोकार र भुइँ तहका मानिसको संवेदनातर्फको यात्रा गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति उनका कवितामा पनि भेटिन्छ । तीव्र भावनामय, रोमान्टिक र निस्सारदेखि इतिहासलाई कठघरामा राखेर प्रश्न सोधिएका खरा कवितासम्मको यात्रा !
संस्मरणको चर्चा नभई उनको लेखनवृत्त अधुरो हुन्छ । उनका बहुचर्चित तीन संस्मरण छन्, ‘धुपीसल्ला र लालीगुराँसको फेदमा’, ‘एउटा चित्रमय सुरुवात’ र ‘अध्ययन र सङ्घर्ष’ । यिनमा सलसल बगेको रेशमी हावाजस्तो, साँझको मधुरो घामको किरणजस्तो मादक भाषामा उनका बाल्य र तरुणजीवनका उल्लास र कोपका बयानहरू छन् । नेपालीमा यति मोहक र हृदयसंवेद्य संस्मरण दुर्लभ छन् ।
परिजातको छुटाउनै नसकिने महत्त्वपूर्ण पाटो हो— स्तम्भ लेखन । संवत् २०४४ देखि थालिएको महिलाप्रधान म्यागजिन ‘अस्मिता’ का सुरुका अङ्कहरूमा पारिजातले ‘मेरो भागमा परेको अस्मिता’ नामको स्तम्भ लगातार लेखिन् (मार्टिन चौतारी र नेपाली म्यागजिनका २५ वर्ष) । सुसन मास्के र अञ्जु क्षत्रीले थालेको ‘अस्मिता’ लाई व्यावसायिकसँगै प्रगतिशील विचारप्रवाहमूलक बनाउन पारिजातले विशेष भूमिका खेलिन् । महिलाको मुक्ति र स्वतन्त्रता आग्रह नै उनको स्तम्भलेखनको केन्द्र थियो ।
चालीसको दशकको मध्यसम्म आइपुग्दा पारिजात पार्टी राजनीतिबाट अलग तर लेखकीय राजनीतिप्रति सचेत लेखक भइन् । प्रत्यक्ष राजनीतिबाट टाढा रहे पनि वैचारिक प्रतिबद्धता र दायित्वको निर्वाहमा भने उनी कहिल्यै पन्छिइनन् । बरु झन् मुखर रूपले लागिन् । यही समयमा उनले आफैंबारे गम्भीर समीक्षासमेत गरेकी छन्, ‘कन्फेसन’ हरू गरेकी छन् । प्रगतिवादी साथीहरूका आलोचनाबाट आत्तिएर कुनै बेला ‘शिरीषको फूललाई जलाइदिनू’ भनेकोमा क्षोभ प्रकट गर्दै त्यो कृतिको पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्ने आग्रह राख्नु महत्त्वपूर्ण स्वीकारोक्ति हो । कतिपय समालोचकले यसलाई पारिजातको आत्ममुग्धता र विचलन भनेर आरोपसमेत लगाएका छन् ।
जुन आन्दोलन र पक्षधरताका लागि उनले आफ्नो उत्पादक उमेर र ऊर्जा खर्च गरेर वैचारिक नेतृत्वसमेत गरिन्, त्यही आन्दोलनका जिम्मेवार मानिसहरूले जीवनका पछिल्ला दिनमा उनको खुब आलोचना गरे, उनका पछिल्ला रचना (‘परिभाषित आँखाहरू,’ ‘बोनी’ लगायत) प्रगतिवादी नभएको जिकिरसमेत गरे । फित्ता बोकेर वादको नाप निकाल्ने अमिनहरूले जे भनून्, सामाजिक र सांस्कृतिक आन्दोलनमा उनको हिस्सेदारी अटुट रह्यो । राजनीतिक आन्दोलनमा बौद्धिक हस्तक्षेप र खुला सहयोग गर्ने कुरामा पारिजातको नेतृत्व स्मरणीय छ । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको आन्दोलन (२०४६) मा कवि लेखकको प्रतिनिधित्व गर्दै कालो पट्टी बाँधेर सत्तासँग जुध्नु, तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको खरो विरोध गर्नु, विभिन्न सामाजिक आन्दोलन र अभियानमा खुलेर समर्थन गर्नुलगायतका कुरा सतहमै देखिए । यसले उनलाई बिस्तारै एक साझा लेखकको विम्बसमेत दियो ।
पारिजात लेखक र एक्टिभिस्ट मात्र होइन, एक चिन्तक पनि हुन् । दूरदर्शी र सामाजिक–राजनीतिक अन्तरविरोध चिन्ने स्रष्टा हन् । उनी कुनै एक समूहविशेषकी पेवा मात्र होइनन्, तर लेखक आहूतिले भनेजस्तै (‘मैले चिनेका नौ बहिनी पारिजात’) मृत्युपछि उनका विचारको स्याहार र अनुशीलन गर्ने विशेष जिम्मा भने विशेष समुदाय र संगठनमाथि बढी छ । तर उनीहरू पारिजातको, उनका विचारको सम्मान र जतन गर्न कति प्रतिबद्ध छन् ? त्यो शंकाको घेराबाहिर छैन ।
नारीमुक्ति आन्दोलन र नारीवाद
पारिजात मूल रूपले नारी मुक्ति आन्दोलनकी कर्ता हुन् । यो कुरा उनका केही उपन्यास, स्तम्भ, कविता र संस्मरणहरूमा ठाउँ–ठाउँमा भेटिन्छ । व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनबिना महिलाका अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैनन् भन्नेमा उनी तीसकै दशकमा पूर्ण रूपले सचेत थिइन् । यो सचेतता माक्र्सवादको गहिरो बोधबाट नि:सृत थियो भन्नेमा दुईमत छैन । रोचक कुरा के छ भने, रूसी कम्युनिस्ट आन्दोलनका नायक लेनिनप्रति उनमा विशेष सम्मान र प्रेम थियो । मृत्यु हुनुभन्दा ठीक अगाडिसमेत उनले मेरो लासमा शिरमाथि लेनिनको तस्बिर राखिदिनू भनेकी थिइन् रे । यो कुरा उनीबारे संस्मरण लेख्नेहरूले भलिभाँती उल्लेख गरेका छन् । उनका लागि लेनिन एक व्यक्ति होइन, राजनीतिक र सांस्कृतिक आन्दोलनका विम्ब थिए, जसले घरभित्र र बाहिरका अतिरिक्त श्रमबाट मुक्त गरेर महिलाहरूको सिर्जनात्मक सहभागितासहितको समाजको पक्षपोषण गर्थे ।
पारिजातमा वामपन्थको जुन प्रभाव पर्‍यो त्यसले उनलाई प्राज्ञिक वा सिर्जनाको तहमा मात्र होइन संगठित आन्दोलनको ‘प्राक्टिकल’ बाटोमा समेत हिँड्न प्रेरित गर्‍यो । शरीर कुँजिने कठोर रोगबाट ग्रस्त भए पनि उनी साङ्गझैं देशका विभिन्न भागमा पुगिन् । त्यहाँका मानिसहरूसँग अन्तरक्रिया गरिन् । महिला संगठनको नेतृत्वकारी भूमिकामा रहँदा नेपाली समाजका वर्गीय र लैंगिक दुवै खाले समस्याको पहिचान गरिन् । महिलाका समस्या र पीडा अरूका भन्दा विशिष्ट प्रकारका हुन् भन्नेमा उनी प्रस्ट थिइन्, तर यो समाजका अरू आन्दोलनभन्दा भिन्दै लडिन्छ वा त्यसरी पार लाग्छ भन्नेमा उनको विश्वास थिएन । राजनीतिसँग समानान्तर महिला आन्दोलनका पक्षमा उभिँदा समाजको सिङ्गो उत्पीडित समुदायसँगसँगै समेटिएर आउँछ भन्ने उनको विचार निरन्तर प्रासंगिक छ । उत्पादक शक्ति र सम्बन्धसँग नगाँसिएको महिला आन्दोलनचाहिँ कर्ताहरूले एक्लाएक्लै आफ्नो करिअर बनाउने कुरामै सीमित हुन्छ र त्यो महिलाको अस्मिताको साझा क्यानभास बन्न सक्दैन भन्ने उनको आग्रह झनै सान्दर्भिक छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठेको महिला मुक्ति आन्दोलन, महिला दशक (१९७५–१९८५) र विश्वभरको समाजका प्रतिरोधी महिला संगठन, विभिन्न रूपले प्रसारित नारीवादका ध्वनिहरूबारे उनी कति ‘अपडेट’ थिइन्, ‘आधी आकाश’ का लेखहरू साक्षी छन् । यसै शृङ्खलामा उनले नेपालीमा अनुवाद (मुरारी अर्यालले) गराई प्रकाशन गरेको अमेरिकी समाजशास्त्री एवलिन रिडको कृति पनि पर्छ । नेपालीमा ‘जीव विज्ञान नारीवादको नियति होइन’ शीर्षक दिइएको यो संकलन अहिले बजारमा दुर्लभ छ । नारीवादलाई अन्योल र अन्तरविरोधको भुमरीमा बेवारिसे नछोडी यसको सही दिशाबोध गराउनु पारिजातको सफलता हो । चालीसको दशकमै उनले नेतृत्व दिएको नारीवादी आन्दोलन नारीमुक्ति आन्दोलनबाट भिन्न थिएन, सँगै थियो ।
महिलामाथि हुने घरेलु हिंसादेखि सामाजिक–सांस्कृतिक शोषणका सबै रूपविरुद्ध उनले गरेको पैरवीको सानो अंश पनि आज कुनै संगठित र पैसाको खोलो बगेका संस्थाले समेत गरेका छैनन् । तत्कालीन सामाजिक मनोविज्ञानदेखि गीतसङ्गीत र मिडियासम्मको दोहोलो काढेर महिलाको गरिमा र सार्वभौम अधिकारका पक्षमा बोल्ने पारिजातका विचार आज नारी मुक्ति र नारीवादी आन्दोलन बाटोमा हिँड्नेका लागि बलियो एक अभिभावक हुन् । यद्यपि, बहसमा थरी–थरीका नारीवादको चर्चा भए पनि नेपालको राजनीतिक र सांस्कृतिक विशिष्टतामा हाम्रै आवश्यकताको मुक्ति आन्दोलन र नारीवादी आन्दोलन गर्नुपर्ने पारिजातको आग्रह मननीय, अनुसरणीय छ ।
प्रकाशित : आश्विन ७, २०७४ ११:३९
१९ नम्बर : अवसाद र शोकका कथा
भाद्र १०, २०७४ सरिता तिवारी
पठन कोरा पठन मात्र नहोस् । पढ्नकै लागि मात्र नहोस् । पठनले आफूलाई नयाँ मानिस बनाइदेओस् । सोचको तलाउ तरङ्गित बनाइदेओस् । कुनै नयाँ सुगन्ध बोकेको हावा आफूसँग छोइएर बहेजस्तो ।
कुनै फूलको कोपिला अचानक भित्री संसारबाट पट्ट फुटेर बाहिर निस्केजस्तो । कुनै नयाँ किताब (प्रकाशनका दृष्टिले होइन, हात लागेका हिसाबले) सँग मेरा आफ्नै किसिमका अपेक्षा हुन्छन् ।
‘१९ नम्बर’ पढ्नुपर्ने केही कारण थिए । पछिल्ला केही वर्षयताको नेपाली कथासाहित्य उपन्यासको भीडभित्र कतै अलमलिएको देखिन्छ । युवा पुस्ताका थोरै मात्र कथाकार छन् जसलाई आँखाले पछ्याउन खोज्छ । जसका लेखनले एकप्रकारको लोभ र आकर्षण जगाइदिन्छन् । बाँकी त स्थिति यस्तो छ कि, जेजस्तो होस् उपन्यास नै लेख्नुपर्ने होडमा कुदेका छन् लेखकहरू ।
आज गुरुप्रसाद मैनाली, बीपी कोइराला, शिवकुमार राई, भवानी भिक्षु, पारिजात, प्रेमा शाह, रमेश विकल आदि पढ्दै कथाको स्वाद लिएको पाठक रनभुल्ल पर्ने स्थिति छँदै छ । मनु ब्राजाकी, राजब, भाउपन्थी वा इस्मालीलगायतसम्म आइपुग्दा नेपाली कथाप्रति आश्वस्त बन्ने ठाउँ भए पनि आज आएर औंलामा गन्न सकिने मात्र कथाकारहरू छन् जसको लेखाइमा कथातत्त्व र लेखकीय विवेकले ‘कन्भिन्स’ हुने स्थिति अझै जीवित छ । तर अब्बल भनिएर ठूलै नामको पुरस्कार प्राप्त कथाकृति पढ्दासमेत सकसलाग्दो हुनुमा कि (म) पाठकको रुचिको दोष छ कि वातावरणको । के आजको कथाकार व्यक्ति, समाज र घटनाचक्रहरूको गम्भीर अध्येता बन्न नसकेकै हो ? या ऊभित्र सत्यको भाषा कमजोर भएर हो ? अथवा मभित्रको पाठक अनावश्यक अपेक्षाकारी भएको मात्रै हो ?
‘१९ नम्बर’ अनमोलमणिको चौथो कृति हो । कथामा दोस्रो । यसअघि यिनको ‘निलिमा र गाढा अँध्यारो’ नामक कथाकृति प्रकाशित भैसकेको छ । झन्डै दुई दशक सक्रिय पत्रकारितामा सम्बद्ध रहेका यिनी कविता पनि लेख्छन् ।
‘१९ नम्बर’ मा कुल नौ थान कथा छन् । सुरुमै छ शीर्ष कथा, ‘१९ नम्बर’ । बर्ताेल्त ब्रेख्तको छोटो कविता ‘इन द डार्क टाइम...’ लाई छायाचित्र जसरी पृष्ठभूमिमा प्रयोग गरिएको यो कथा नेपालको रटन्ते शिक्षा पद्धतिमाथिको एउटा शोकगीतजस्तो लाग्छ । चार कक्षामा पुगेपछि मात्र अंग्रेजी पढाइ हुने अमूक सरकारी विद्यालय छ । त्यहाँका मास्टर कुन तहका अंग्रेजीवाज हुन्छन् र तिनले कस्तो अंग्रेजी सिकाउँछन् भन्ने कुराको मसिनो बयान छ यसमा । हेडमास्टरसमेत रहेका पदम सरको अंग्रेजी सिकाइ अद्यापि अधिकांश विद्यालयहरूको नियति हो ।
‘आई आई माने म’‘आरएएम राम राम माने भेडा’ ‘केएनआईएफई कनाइफ कनाइफ माने छुरा’
पदम सरको यस्तो सिकाइ रोहितकुमार ठकुरीको दिमागमा ठ्याम्मै घुस्न सकेन । ऊ चार कक्षामा अंग्रजीमै गुल्टिन्छ । अरू विषयमा राम्रो भन्न सकिने नम्बर आए पनि रोहित ठकुरी ‘ल्वाँठ’ ठहरिन्छ । त्यसैले उनै पदम सरले उसको जिन्दगी खोलैखोला जाने भविष्यवाणीसमेत गर्दिन्छन् मानौं अंग्रजी नै उसको भाग्यविधाता हो । पदम सरका अवतारहरूले उसलाई विश्वविद्यालयसम्मै ऐंठन गरिरहन्छन् । अन्तत: अंग्रेजी नजान्नुको ‘प्रकोप’ खप्न नसकेर उसले आत्महत्याको बाटो समात्छ । यो कथा एकैसाथ शिक्षा पद्धति र अंग्रेजीजन्य सांस्कृतिक उपनिवेशको मनोविज्ञान दुवै प्रति एक गम्भीर प्रश्नचिह्न हो । अंग्रेजीको ब्याक पेपर दिँदादिँदा हत्तु परेको रोहित प्रोफेसरसँग सोध्छ, ‘अंग्रेजी नजानेर के हुन्छ ? के सारा संसार अँध्यारो हुन्छ ? ज्ञानका सारा ढोका बन्द हुन्छन्...अंग्रेजी नजाने हेडमास्टर बन्न सकिन्न ?’ बा चाहन्छन्, पढाइ सकेर छोरो गाउँको स्कुलमा हेडमास्टर बन्न आओस् तर छोरोलाई कसरी अंग्रेजीको प्रेतले खाइरहेको छ, तिनलाई पत्तो छैन ।
‘जूनमा आमा’ मार्मिक कथा हो । प्रथम पुरुष दृष्टिविन्दुमा लेखिएको यो कथाको वाचक एउटा सानो बालक हो । एउटा छोराको आँखाबाट उसकी आमाको चित्र देखाउन मात्र होइन पिताबाट समेत अपहेलित कलिलो बालकको उत्तप्त हृदयको अनुभूति पस्कन पनि यो कथा सफल भएको छ । तेस्रो कथा ‘नूरप्रताप किन अमेरिका गए ?’ बलियामध्येको एक कथा हो । एउटा मध्यमवर्गीय सहरिया बुद्धिजीवीको मनोविज्ञान र उसमाथि गरिएका तिखा निन्दाचर्चाहरूलाई खुब परिपाठसँग बुनिएको यो कथाले बडो गजबले अन्त्यसम्मै कौतूहलको लय पक्रेको छ । नेपालका विद्यार्थी, प्राध्यापक, कलाकार र पत्रकार मात्र होइन ‘राम्रै आय आर्जन’ गर्न सक्ने निजामती कर्मचारीसमेत दिमागमा अमेरिका बोकेर हिँड्छन् तर संयोगवश अमेरिका जाने अवसर पाएको नूरप्रताप अमेरिका जाने कुरामा उदासीन छ । उसको उदासीनताप्रति सयौं लख र अड्कल काट्ने मानिसहरूका टिप्पणी अर्थपूर्ण छन् । घरभित्र र बाहिरका प्रश्नहरूबाट अति लखेटिएको नूरप्रतापको मनोविज्ञानका रेसा–रेसा यस कथामा जीवन्त रूपमा प्रकट हुन्छन् ।
‘अँध्यारो’ र ‘अर्को एउटा गुलाब’ जस्ता कथामा प्रेमको हार्दिक अपिल र त्यसमाथि परिस्थितिको कठोर त्रासदी एकैसाथ भेटिन्छ । ‘अँध्यारो’ सटीक कथा भएर पनि घटनाक्रमका क्रमागत तारतम्यहरूको अस्वाभाविकताले उति मुखर बन्न सकेको छैन । विद्युतीय उपकरणहरूको दास बनिरहेको मानिसलाई ‘लोडसेडिङ’ कसरी प्रेमको उज्यालो प्रदान गर्ने अद्भुत अवसर भैदिएको छ भन्ने देखाइएको यो कथा ठीकठाक मात्रै हो । यसले अँध्यारो सबै अवस्थामा एकै अर्थले अँध्यारो ठहरिँदैन भन्ने कथ्यलाई चाहिँ न्याय गरेको छ । ‘अर्को एउटा गुलाब’ देशकालका सामयिक संकटमा च्यापिएकी एउटी केटीको बहुरूपको कथा हो । यो गुलाब फूलको प्रहारले ठाउँको ठाउँ बेहोस भएको अवस्थाबाट थालिएर कथावाचककी सहपाठी (प्रेमिका समेत) गुलाब चौधरीको खोजीमा केन्द्रित भएको छ । प्रचलितभन्दा फरक शैलीको कथाकथनले यसलाई अन्यभन्दा विशिष्ट बनाएको छ । रहस्यकी पुलिन्दाजस्ती गुलाब चौधरी कथाभरि रिँगिरहन्छे । उसका अनेक रूप छन् । मानौं सिंगै सहरमा मात्र गुलाब चौधरीहरू छन् जताततै । पूर्वछापामार गुलाब, रेस्टुरेन्टकी वेट्रेस गुलाब, साहुको घरमा भाँडा माझ्ने लुगा धुने दु:खी गुलाब, कफी सपमा साथीहरूसित बसेर निर्धक्क चुरोटको धूवाँ उडाउने कलेज गर्ल गुलाब, डाक्टर गुलाब, मोडल गुलाब आदि ।
बुनोटको हिसाबले ठीकठीकै भन्न सकिए पनि प्रस्तुतिका दृष्टिले ‘अस्तु’ कथा सापेक्षत: माथि उक्लन सकेको छैन । यसले सर्सरी एक आप्रवासी नेपाली परिवारमा परेको आकस्मिक शोक र विदेशमा बसेका नेपालीको पीडा बयान गर्छ । कथानकमा खेल्न सकिने त्यस्ता पर्याप्त स्थानहरू छन्, तिनको सदुपयोग गर्न सकेको भए कथा धेरै सानदार बन्न सक्थ्यो । कथाको मर्म मृत्युको संवेदना नै हो । त्यसभन्दा बढी परदेशको ठाउँमा एउटा मृत्युको मूल्य कति हो भन्ने कुरालाई पक्रनु यस कथाको सबल पक्ष हो । सरल रेखामा बगेको यो कथा मध्यम कोटीमै सीमित हुन पुगेको छ ।
‘कन्टेनरमा रातो डायरी’ युद्धजन्य हत्या, हिंसा र विनाशकारी परिणतिप्रति निराश पूर्वछापामारको कथा हो जुन युद्धपछि सिंगो नेपाली समाजले प्राप्त गरेका सकारात्मक परिणतिबारे लगभग मौन छ । यहाँ किताब लेख्दै गरेको एक छापामार छ, क्यान्टोनमेन्टभित्र बसेको । उसको कथाका स्थुल अंशहरू तृतीय पुरुष दृष्टिविन्दुमार्फत भनिएको छ । सँगसँगै ‘न्यारेटर’ पनि हाजिर छ । कथाको छापामार विचारबारे गहिरिएर र आफैंमा स्पष्ट भएर संसार बदल्ने प्रणले हिँडेको मानिस लाग्दैन । लहैलहैमा कुदेको छ । युद्धप्रतिका उसका टिप्पणीहरू एक भुक्तभोगीका जस्ता लाग्दैनन् । यी बयानमा जीवन्तता थप्न मिहिनेत गरेको भए कथा आफ्नै प्रकारको सैद्धान्तिकीमा बलियो बन्ने थियो । कथाका बयान सुनिजान्ने कसैले गरेका बयानजस्ता लाग्छन् । छापामार आफू हिँडेर यहाँसम्म आइपुगेको बाटोप्रति निराश मात्र होइन अपराधबोधले समेत ग्रस्त छ । युद्धको मोहरीमा तानिएको मानिस युद्धका विवेकसम्मत तर्कबिना मर्न र मार्न तयार हुनुका दु:ख बोकेर कुनै गल्फ देशको रोजगारीमा हिँडेको छ । कथाकथनले सपाट वर्णनको तह छेडेर अनुभूति र विचारको गहिरो दहमा हाम्फालेको हँुदो हो त ‘कन्टेनरमा रातो डायरी’ एक रोज्जा कथा बन्ने थियो । ‘स्खलन’ नगरवधूका आँखाबाट गरिएको क्रान्तिनायकमाथिको प्रक्षेपण बनेको छ । छोटो भए पनि मुखर र सजीव कथ्यले कथालाई प्रभावी बनाइदिएको देखिन्छ । ‘इल्युजन’ कथा कम, भावहरूका मसिना रेसाको गुजुल्टो बढी हो । यो एकालापीय शैलीमा छ । ‘टाइम र स्पेस’ को चेतनाजन्य पीडा बोकेर एक्लै बस्दा वा एक्लै हिँड्दा आउने मध्यमवर्गीय भावलाई रमरम स्वादमा प्रस्तुत गरिएको यो कथा देशको राजनीतिक उहापोहको पनि कथन हो । कथाले महामारीझैं फैलिरहेको भ्रष्टता, समयको पल्ला भित्र–बाहिर गरिरहेका उदास हावाजस्ता चेहराहरू, काला वादलका झुन्ड र तिनैमा कैद भएको एक दार्शनिक पाराको मानिसको नि:श्वासलाग्दो र विषादजनक परिस्थितिलाई दुरुस्त उतारेको छ । यहाँ भनिएको छ, ‘...बाल्डो, यहाँ मान्छेहरूले सात सालको एक दिनलाई पनि महत्त्वपूर्ण माने र छयालीस सालको एक दिनलाई पनि उत्सवको रूपमा सम्झिए । अप्रिल क्रान्तिको एक दिन पनि उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण नै बन्यो । प्रत्येक महिनाको एक दिन मात्र मान्छे महत्त्वपूर्ण भनेर सम्झिरहेको छ ।’
‘१९ नम्बर’ ले केही अवसाद र केही शोकहरूको धूवाँसहित आफ्नो समयको बयान गरेको छ । आत्महत्यामा पुगेर टुङ्गिएको शीर्ष कथा नेपाली शिक्षापद्धतिको भयावह त्रासदी त हो तर आत्महत्यालाई निर्विकल्प देखाइदिएर कथाकार स्वयम् गलत निष्कर्षको फेर समाउन पुगेका छन् । जबकि कथाको पाश्र्वमा कथावाचक पटक–पटक ब्रेख्तको अत्यन्तै आशावादी कविता ‘इन द डार्क टाइम...’ सम्झिरहन्छ । पढिरहन्छ । कथाले रोहित ठकुरीलाई अँध्यारो गल्छीमा पुर्‍याएर निरूपाय मर्न छोडिदिनु हुँदैनथ्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो । यसका साथै अन्य अधिकांश कथा समकालका अवसाद नै हुन् । पात्रहरू कुनै न कुनै अवसादका घाउ बोकेर हिँडिरहेका छन् । कथनशैलीमा केही ठाउँमा गरिएका प्रयोग सुन्दर छन् । भाषिक मिठासका लागि कथाकार धन्यवादका पात्र छन् नै तर भाषामा गर्न सकिने चमत्कृतिका लागि प्रशस्त रिक्त स्थानहरू अझै देखिन्छन् । कथाको परम्परित, एकरेखीय र सपाट विस्तार कम्तीमा अनमोलमणि जत्तिका अभ्यस्त कथाकारसँग अब अपेक्षा गरिँदैन । पत्रकारितामा प्रचलित रिपोर्ताज शैलीका बाछिटा पनि यहाँ ठाउँ–ठाउँमा परेका छन् । यस्ता ठाउँ काल्पनिकी र ग्राह्य अतिरञ्जनाले लिनु बरु जाति हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
नेपाली कथाले तय गरेको यात्रामा अहिले तुलना गर्दा पहिले र अहिलेका कथाका कथ्यमा त ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । यो युगजन्य परिवर्तन पनि हो । पछिल्लो समयका कथामा वैयक्तिक घेराभित्रका मनोदशा कम र समाजको चित्र बढी आएको देखिन्छ । सामाजिक यथार्थ नै आजका कथाको मूल आधार हो । तर कथाहरूले समाजको किलकिलेभित्र पसेर त्यहाँको भाषा मिहिन गरी खिपेको भेट्न अझै मुस्किल छ । व्यक्तिभित्रका उल्लास र उच्छवासको मौलिक ध्वनिको बुनोटको कुशलता पनि कमै कथाकारमा देखिन्छ । कवितामा जस्तै समयको एउटा विश्वसनीय इतिहास बन्नुपर्ने अपेक्षा तत्समयका कथाहरूमा, उपन्यास वा अन्य साहित्यमा पनि गरिन्छ । बाहिरी संसारको चित्र र ध्वनिलाई आफूभित्रको सत्यको भाषामा घोलेर नयाँ रूपमा बुन्नु र विश्वसनीय तरिकाले भन्न सक्नु कथाकारको अद्भुत कला हो । यही कला तत्समयको भावात्मक इतिहासको दस्तावेज पनि हो । आज कथा लेखिरहेका र लेख्न खोजिरहेका कथाकारसँग यो जिम्मेवारी अपेक्षित छ । अनमोलमणि त्यसबाट अछुतो रहने कुरो भएन ।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७४ ०९:५०